No 1 Nepali Entertainment Blog Halloween Costume ideas 2015
No 1 Nepali Entertainment Blog
कोरीयन भाषा परीक्षा EPS को नतिजा प्रकाशन भयो, नतिजा यहाँबाट हेर्नुहोस....
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत लिइएको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । ६८ हजार भन्दा बढीले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका...
ज्योतीको कला विक्छ कि छाला ?
विदेशमा आयोजना हुने स्टेजमा कार्यक्रममा अंगप्रदर्शन गरेर चर्चामा आएकी लोकगायिका ज्योति मगरले आफ्नै माइती गाउँ छेउमा पनि सो हर्कत छाडिनन् ...
रामगोपाल बर्माको Tweet माथी सनी लियोनको मुद्दा दायर
अभिनेत्री सन्नी लियोनीलाई जोडेर गरेको एउटा टि्वटले गर्दा बलिउड निर्देशक रामगोपाल बर्मा समस्यामा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको ...
पहिले प्रतियोगी, अहिले "जज" !
नेपाली संगीतको आकाशमा र्इन्दिरा जोशी नयाँ नाम होइन । हामी मध्ये धेरैलार्इ थाहा भएकै कुरा हो की र्इन्दिरा जोशी कुनै समय नेपाल टेलिभिजनबाट...
दिपाश्री निरौलाकी बहिनी रानु निरौला पनि अब कलाकरितामा प्रवेश, कुन क्षेत्रमा ?
तपाइ हामी मध्ये दिपाश्री निरौलालार्इ नचिन्ने त सायदै होलान् । नेपाल टेलिभिजनको तितोसत्यमा दिपा र रेडियो नेपालको एक हास्य कार्यक्रम...
साउदी अरेवियामा ७ हजार ३ सय कामदारलार्इ आम माफी
साउदी अरेवियाले गैह्र कानुनी रूपमा बसोवास गर्दै आएका कामदारलार्इ दिएको ९० दिनको आम माफीमा ७ हजार ३ सय नेपाली रिहा भएका छन् र स्वदेश फर्का...
MMS Scandalमा फसेका १० कलाकारहरू
आज भोली यस्तो लाग्छ सेलिब्रेटि र कन्ट्रोभर्सिज भनेका पर्यायबाची शब्दहरू हुन। समय समयमा नाम चलेका कलाकारहरूको एम एम एस स्क्यान्डलले महोल...
How to Download the videos streaming on the Facebook Timeline? Nowadays, Facebook is the social network with the highest number of users. Fa...
केन्याविरुद्धको खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा
सुनिल धमला र दिपेन्द्रसिंह ऐरीको नयाँ प्रवेश काठमाडौंः आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत केन्याविरुद्धको खेलका लागि नेपा...
नवजात शिशुको तौलमा नयाँ रेकर्ड, जन्मिदै ६ महिनाको बच्चा जत्रो बच्चा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
साथारणतया एउटा नवजात शिशुको त ौल कति हुन्छ? प्राय २.५ -३.५ kg होइन र? तर यहाँ एक नवजात शिशुको तौलले नयाँ इतिहास रचेको छ। यि बच्चा लेज...
कलिउड खेलकुद गीत संगीत प्रविधि बलिउड मनोरञ्जन र्इन्टरनेट समाज स्वास्थ्य
हिमालयन एयरलार्इन्सले साउदी अरेविया दैनिक उडान भर्ने!
हिमालय एयरलाइन्सले भदौ १६बाट दशैं तिहारको अवसरमा साउदीको दमाममा दैनिक सिधा उडान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालीहरुको लागि साउदी अरब, वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य हो । जहाँ करिब ५लाख नेपाली काम गरिरहेका छन् ।
दैनिक सिधा उडानले साउदीमा बस्ने नेपालीहरुको लागि आउँदै गरेको दशैं तथा दिपावलीमा घर आउन आउन सहज कम्पनीले
जनाएको छ । यसबाट दमाम र काठमाडौं यात्रा गर्ने हजाराैं नेपालीहरुको समय र पैसा दुवैको वचत हुनेछ ।
दैनिक उडान संचालन गर्ने हिमालय एयरलाइन्सको विमान उडान नँम्बर एच ९५५९ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट
राति १०ः३० बजे मा प्रस्थान गरी किङ्गफाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दमाममा अर्को दिनको विहान १२ः५० मा अवतरण गर्नेछ ।
त्यसैगरी उडान नम्बर एच ९५६० किङ्गफाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दमामबाट विहान १ः५० बजे उडेर गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थल काठमाडौँमा विहान ०९ः१५ मा अवतरण हुनेछ ।
‘यात्रुहरुलाई सरल, सुलभ र सुविधाजनक हवाई सेवाप्रदान गर्न हामी उत्सुक छौ । साउदी अरव यात्रा गर्दा सामना गर्नुपरेका लामो
लामो ट्रान्जिट र विभिन्न समस्याहरुलाई हाम्रो यो प्रत्यक्ष उडानले समाधान गर्नेछ’ हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ भन्छन्
‘यो दैनिक सिधा उडान हामी आफ्नो यात्रुहरुको लागि महान चाँड वडा दशैं तथा दिपावलीको उपहारको रुपमा पेश गर्न चाहन्छौं ।’
उनले नयाँ सीधा गन्तव्यहरु थप्दै नेपालीलाई सधैं छिटो, सहुलियत दरमा न्यानो स्वागतका साथै हवाई सुविधा दिन तत्पर रहेको बताए
एयरलाईन्सले काठमाडाैं-दमाम-काठमाण्डौको लागि शुरुवाती टिकट दर करबाहेक एकतर्फीको २३ हजार ८ सय र दुईतर्फी ३८ हजार
कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी दमाम-काठमाडौं-दमामको शुरुवाती टिकट दर कर बाहेक एकतफीको ८५० साउदी रियाल र दुईतर्फीको १ हजार ३६० कायम
गरेको छ । दुवै मार्गहरुमा बिजनेस क्लासको लागि ४० केजी र इकोनोमीक क्लासको लागि ३० केजी ब्यागेज अलाउन्स निःशुल्क गरिएको छ ।
हिमालय एअरलाईन्सलअसफार ट्राभल एउण्ड टुरिजमलाई साउदी अरबको लागि आधिकारिक विक्रेता तोकेको छ । उक्त ट्राभल एजेन्सीले
हिमालय एयरलाइन्सको प्रतिनिधित्व गर्दै बजार विस्तार, रिजर्भेसन र टिकट सेवा लगायत सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ ।
हाम्रो फेसबुक पेज लार्इक गरी नियमित सुचना प्राप्त गर्नुहोसः
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत लिइएको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । ६८ हजार भन्दा बढीले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए । उनीहरु मध्ये १२ हजार १०८ उत्तीर्ण भएका ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषितर्फ करिब साढे सात हजार परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
सरकारले यसअघि असार १६ गते नतिजा प्रकाशित गर्ने तालिका बनाएको थियो । तर, केही परीक्षार्थीले जेठ २७ र २८ गतेको परीक्षामा जाँच दिन नपाएपछि फेरि एक हप्ता कम्प्युटरमार्फत परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशित गरिएको हो । यो वर्षको कोटा अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी हो । गत वर्ष ३५ सय युवा कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । कोरियाले यहाँ लिएका सबै परीक्षाका उत्तरपुस्तिका स्क्यानिङमार्फत डिजिट्याज्ड गरेर कोरिया लाने गरेको छ । उसले मेसिनको प्रयोग गरेर ओसीआर प्रविधिबाट उत्तरपुस्तिका जाँच्ने गरेको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सबै कोरिया जान पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी भने नहुने ईपीएस शाखाले जनाएको छ । पास भएकालाई रोष्टर लिष्टमा राखेर लेबर कन्ट्रयाक्ट दिने गरिएको छ । भाषा परीक्षा पास हुनेहरुलाई आगामी फेब्रुअरीबाट उत्तीर्ण कामदारको मेडिकल लगायतका प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
हेर्नुहोस् भाषा परीक्षाको नतिजा
निर्मल उ.मा.वि, तनहुँ हुनेभयो नमुना विद्यालय
व्यास १ हाइस्कुलटार स्थित निर्मल माध्यमिक विद्यालय निर्वाचन क्षेत्र नं २ को नमूना विद्यालयमा छनौट भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सचिव स्तरीय बैठकले निर्मल मा.वि.लाई नमूना विद्यालयमा छनौट गरेको हो । नमूना विद्यालयका लागि क्षेत्र नं २ बाट सत्यवती माध्यमिक विद्यालयले समेत प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।तर सत्यवती मा.वि.लाई समेत पछाडि पार्दै निर्मल मा.वि. छनौटमा पर्न सफल भएको हो । तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट रामशाह मा.वि. र क्षेत्र नं २ बाट पञ्चमुनि मा. वि. नमूना विद्यालय छनौटमा परेका छन् ।
छनौटमा पर्न सफल निर्मल माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक देखि भौतिक पूर्वाधारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशचन्द्र बस्नेतका अनुसार विद्यालयको पढाई, प्रशस्त जमिन , विद्युत र इन्टरनेट सेवा ,विद्यार्थी संख्या , तीन बर्षको एस.एल.सी ⁄ एस.ई.ई नतिजा , सहरीकरण र यातायातको सुविधा लगायतलाई छनौटको आधार मानिएको थियो । त्यस्तै नमूना विद्यालयमा अन्य विद्यालय समेत गाभिने प्रअ बस्नेतले बताए । प्रअ बस्नेतका अनुसार नमूना विद्यालयमा छनौट भएसगै प्रशस्त कक्षा कोठा, छात्र ⁄ छात्राका लागि अलग अलग शौचालय ,चमेना गृह, अडिटोरियन हल, संगित प्रशिक्षण केन्द्र , विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सञ्चार केन्द्र ,इनडोर तथा आउटडोर खेल मैदान र छुट्टाछुटै छात्राबासको व्यवस्था गरिनेछ । प्रअ बस्नेतका अनुसार नमूना विद्यालयको सरंचना निर्माणका लागि ७ करोड भन्दा बढी बजेट विद्यालयलाई प्राप्त हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालयको यो पछिल्लो निर्णयले विद्यालय परिवारलाई निकै उत्साही बनाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशचन्द्र बस्नेत बताउँछन् ।
साउदी अरेवियाले गैह्र कानुनी रूपमा बसोवास गर्दै आएका कामदारलार्इ दिएको ९० दिनको आम माफीमा ७ हजार ३ सय नेपाली रिहा भएका छन् र स्वदेश फर्कार्इएको छ। यि मध्ये ८० जना घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिलाहरू छन्।
साउदी स्थित दुताबासका अनुसार दमाम,जेदाहा र रियादबाट गैह्रकानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलार्इ विना सजाय स्वदेश फिर्ता पठार्इएको हो। १५ वर्ष सम्म घर फर्कन नपाएका कामदार पनि आम माफीमा स्वदेश फर्केको दतावासले जनाएको छ।
यस कार्यका लागि नेपाल सरकारले ५० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।साउदी सरकारले 'उल्लङ्घन विनाको देश' अभियान शुरू गरि आम माफी दिएको हो।
समाज , स्वास्थ्य
साथारणतया एउटा नवजात शिशुको तौल कति हुन्छ?
प्राय २.५ -३.५ kg होइन र?
तर यहाँ एक नवजात शिशुको तौलले नयाँ इतिहास रचेको छ। यि बच्चा लेजिङ्गटन, दक्षिण क्यारोलिनामा जन्मेका हुन्। यो वच्चा जन्मदै १४ पाउन्ड अर्थात करिव ६.३५ केजीको थियो जुन अहिले सम्मको र्इतिहासमा यो नयाँ रेकर्ड हो।
जब यो बच्चाको जन्म भयो, प्रसुति गृहमा एउटा नयाँ बातावरण सिर्जना भयो। डक्टरहरू भन्न थाले-'वाओ, कति ठूलो बच्चा!' नर्सहरूले बच्चाको वजन अनुमान लगाउन थाले ।जब उनिहरूले बच्चालाइ जोखे तव भन्न थाले-'ओ माइ गड, यो त अहिले सम्मकै सवैभन्दा अचम्मको कुरा हो।'
बच्चाको आमाको अरू पनि २ बच्चा छन् । ति दुवै सामान्य तौलका थिए। आमाले भनिन कि उनको बच्चालार्इ देख्दा सवैको प्रतिकृया देखेर उनि दंग परेकि थिइन् ।
बच्चाका हजुरआमा/बुवालार्इ बच्चाका लागि अरू नै नयाँ कपडाको व्यवस्था गर्न दौडिनु परेको थियो किनकी उनीहरूले बच्चाका लागि साधारण किसिमका कपडाको व्यवस्था गरेका थिए ।
साधारणतया एउटा बच्चाको तौल ५ - ६ महिनाको उमेरमा मात्र ६ के.जी. हुने गर्दछ। जोसिएका बच्चाका बावुले भने-'म यसलार्इ भविष्यमा खेलाडी बनाउछु'
गुगल पनि जरिवानाको सिकार! अरबौं डलर जरिवाना...
प्रविधि , र्इन्टरनेट
बीबीसीका अनुसार युरोपेली आयोगले बजार तोडमोड गरेको आरोप लगाउँदै गुगललार्इ २ अर्ब ७० करोड डलर जरिवाना गरेको छ। सर्च रिजल्टको शिर्ष स्थानमा आफ्नै सपिङ्गलार्इ प्रवर्द्धन गरेर शक्तिको दुरूपयोग गरेको र उपभोक्ताको छनोट अधिकारलार्इ लत्याएको भन्दै आयोगले गुगललार्इ उक्त जरिवाना गरेको हो । स्थापनयता गुगलविरूद्ध सुनार्इएको यो सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो ।
आयोगले ९० दिन भित्र प्रतिस्पर्धा विरोधी आफ्नो अभ्यास अन्त्य गर्न आदेश दिँदै अत्यथा थप जरिवानाको सामनाका लागि तयार रहन भनेको छ। गुगलले भने उक्त जरिवाना विरूद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ।
गुगलले ९० दिन भित्र आफ्नो सपिङ्ग सर्भिस सञ्चालन गर्ने तरिका परिवर्तन नगरे आफ्नो भातृ कम्पनी 'अल्फाबेट'ले विश्वभरबाट गर्ने दैनिक आम्दानीको ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। उक्त कम्पनीको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार दैनिक आम्दानीको ५ प्रतिशत भनेको १ करोड ४० लाख डलर हो । अल्फाबेटको हालको सम्पति १७२ अर्ब डलर छ।
हामीलार्इ फेसवुकमा लार्इक गर्नुहोस
हिमालयन एयरलार्इन्सले साउदी अरेविया दैनिक उडान भर्...
मनोरञ्जन स्वास्थ्य समाज प्रविधि कलिउड बलिउड गीत संगीत खेलकुद र्इन्टरनेट
No 1 Nepali Entertainment Blog © 2017. सर्वाधिकार सुरक्षित
***Designed by| Khadga Darai***